आईसीटी इन्फोट्रेडबाट व्यवसायीहरू उत्साहित | गृहपृष्ठ
Home बजार आईसीटी इन्फोट्रेडबाट व्यवसायीहरू उत्साहित
पुस २४, काठमाडौं (अस)। बुधवारदेखि राजधानीमा जारी आईसीटी इन्फोट्रेड २०११ बाट सूचना प्रविधिसम्बद्ध व्यवसायीहरू निकै उत्साहित भएका छन् । अवलोकनकर्ताहरूको बढ्दो भीड तथा प्रविधिप्रति देखिएको रूचिका कारण उनीहरू उत्साहित भएका हुन् । ३ लाख ५० हजारले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको यस मेलाको शनिवार मात्रै करीब १ लाख १० हजारले अवलोकन गरेको आईसीटी एशोसिएशनका अध्यक्ष सागरदेव लाखेले जानकारी दिए । ‘यसपटकको मेला हामीले अपेक्षा गरेभन्दा धेरै राम्रो भयो,’ उनले भने, ‘सबैपक्षको सहयोगका कारण हामीहरू निकै उत्साहित भएका छौं ।’
एक्स्पोमा आउने ग्राहकको पेनड्राइभ, मोबाइल तथा ल्यापटपमा खुबै भीड देखिन्थ्यो । शनिवार मेला अवोलकनकर्ताको ज्यादै भीडका कारण व्यापारीहरूलाई हम्मेहम्मे नै परेको थियो । मेलामा सहभागी एसएचटीसी इण्टरनेशनलका डीबी श्रेष्ठले यसपटकको मेला ब्राण्ड प्रवर्द्धनका लागि निकै फलदायी भएको टिप्पणी गरे । आफ्नो स्टलमा रहेका प्रोलिङ्क, फुजित्सुजस्ता सूचनाप्रविधिसम्बन्धी सामग्रीप्रति ग्राहकहरूले धेरै चासो लिएको उनको भनाइ छ । यस्तै, जी फाइभ स्टलका पुल्कित भीमसरियाले पनि आफ्नो स्टलमा मोबाइलसम्बन्धी जानकारी लिन आउने ग्राहकहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको बताए ।
कम्प्युटरका स्टलहरूमा ग्राहकहरू पेन ड्राइभ लिनका लागि निकै झुम्मिएका देखिन्थे । ल्यापटप, प्रिण्टर, फोटोकपी मेशिनजस्ता सामानहरूको मूल्य, वारेण्टी, ग्यारेण्टीलगायतका विषयमा सोधखोज गर्ने ग्राहकहरूको सङ्ख्या ठूलै देख्न सकिन्थ्यो । इशान इन्फोसिसका बच्चुराम भट्टराईले आफ्नो स्टलमा आएका ग्राहकहरूमध्ये धेरैले पेन ड्राइभ खरीद गरेको बताए ।
शाखा थप्दै एनसीसी बैङ्क
पुस २४, काठमाडौं (अस )। नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षमा थप ६ शाखा खोल्ने बताएको छ । बैङ्कको शुक्रवार सिध्दार्थनगर भैरहवामा सम्पन्न तेह्रौं वार्षिक साधारणसभामा उक्त जानकारी दिइएको हो । सभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार बैङ्कले गत आवमा करीब रू. ५७ करोड २३ लाख नाफा (कर तथा बोनसअघि) गरेको थियो । गत असारमसान्तमा बैङ्कको रू. १० अर्ब ८२ करोड निक्षेप सङ्कलनका साथै रू. ८ अर्ब ३९ करोड कर्जा प्रवाह रहेको थियो । सो अवधिमा बैङ्कको निष्क्रिय कर्जा २ दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको थियो । गत आवमा बैङ्कको पूँजीकोष पर्याप्तता १३ दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैङ्कको प्रधान कार्यालय सिध्दार्थनगर भैरहवा तथा कर्पोरेट कार्यालय काठमाडौंको बागबजारमा छ । बैङ्कका हाल १७ ओटा शाखा सञ्चालनमा छन् । हाल बैङ्कमा १ लाख १६ हजारभन्दा बढी निक्षेपकर्ता तथा अन्य ग्राहक आबद्ध रहेको बैङ्कको दाबी छ । बैङ्कका १७ ओटा एटीएम सञ्चालनमा छन् । चालू आवमा काभ्रेको बनेपालगायत अन्य सम्भाव्य स्थानमा पनि एटीएम सेवा सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको बैङ्कले जानकारी दिएको छ । बैङ्कले अधिकांश बचतखातामा रू. १० हजारसम्मको औषधिउपचार बीमा तथा रू. ५ लाखसम्मको दुर्घटना बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
विराटलक्ष्मीको लाभांश पारित
पुस २४, काठमाडौं (अस)। विराटलक्ष्मी विकास बैङ्कको छैटौं वार्षिक साधारणसभा शनिवार विराटनगरमा सम्पन्न भयो । उक्त सभाले शेयरधनीहरूलाई २३ दशमलव ७५ प्रतिशतका दरले बोनस शेयर दिने सञ्चालक समितिको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । सभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार बैङ्कले गत आवमा रू. २ करोड ४ लाख खुद नाफा गरेको थियो । यो अघिल्लो आवको तुलनामा ७५ प्रतिशतले बढी भएको बैङ्कका कार्यकारी अध्यक्ष प्रभुप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।
बैङ्कले निकट भविष्यमा वर्तमान चुक्ता पूँजीमा १ बराबर १ दशमलव ५ का दरले हकप्रद शेयर जारी गर्ने बताएको छ । हकप्रद शेयर तथा बोनस शेयर वितरणपश्चात् बैङ्कको चुक्ता पूँजी रू.१६ करोड ५६ लाख पुग्ने बताइएको छ । बैङ्कका हाल ११ शाखा सञ्चालनमा छन् ।
बुद्ध एयरमा लखनउबाट आउनेको चाप
पुस २४, काठमाडौं (अस) । निजी क्षेत्रको वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरले शुक्रवारबाट काठमाडौं-लखनउ उडान शुरू गरेको छ । उडान शुरू गरकै दिन भारतको लखनउबाट ४५ यात्रु काठमाडौं आएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । पहिलो उडानमा ५ जना यात्रुसहितको एक टोली शुक्रवार काडमाडौंबाट लखनउ गएको थियो । आइतवारको उडानमा लखनउबाट आउने यात्रुको अकुपेन्सी पूर्ण भएको कम्पनीले बताएको छ । यसले आइतवार काठमाडौंबाट ३५ यात्रु लखनउ लैजाने पनि बताएको छ ।
कम्पनीले करबाहेक न्यूनतम शुल्क रू. ५ हजार ६ सयमा काठमाडौंदेखि लखनउसम्मको उडान शुरू गरेको छ । कम्पनीले हप्ताको तीन ओटा उडान गर्ने बताएको छ । कम्पनीले साताको आइतवार, बुधवार र शुक्रवार काडमाडौं-लखनउ-काडमाडौं उडान गर्ने भएको छ । बुद्धले एटीआर-४२ जहाजमार्फ उडान शुरू गरेको हो । चारपाँच महीनाभित्रै एटीआर-७२ जहाज ल्याउने तयारीमा लागेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । उक्त जहाजको ७२ यात्रु बोक्ने क्षमता छ । सो जहाज नआउँदासम्म ४७ सिट क्षमता भएको एटीआर-४२ बाट नै सेवा प्रदान गरिने कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले बताएका छन् । बुद्ध एयरको निकट भविष्यमै भारतमा दैनिक उडान गर्ने योजना रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
सीटीभी विजेतालाई हिरो होण्डा डिओ
पुस २४, काठमाडौं (अस) । सीटीभी मोबाइलले दशैँतिहारका अवसरमा ल्याएको ‘सीटीभी भाग्यशाली विजेता’ कार्यक्रममा सरिता पाण्डेले हिरो होण्डा डिओ प्राप्त गरेकी छिन् । शनिवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच सीटीभी मोबाइलका प्रबन्ध निर्देशक अलाइभ ग्लाइडरले उनलाई सो उपहार प्रदान गरे । यस्तै दोस्रो भएका पुजनजङ्ग गुरूङले ३२ इञ्चको सोनी एलसीडी प्राप्त गरे भने तेस्रो भएका दीक्षान्त केसीले एचटीसी एचडीटू मोबाइल सेट प्राप्त गरे । दशैतिहारका अवसरमा सीटीभी मोबाइल खरीद गरेका करीब ३० हजार ग्राहकमध्ये १५ जनालाई भाग्यशाली विजेता घोषणा गरिएको निर्देशक ग्लाइडरले जानकारी दिए । सोअवसरमा अन्य विजेताहरूलाई विभिन्न ब्राण्डका मोबाइल सेटहरू प्रदान गरिएको थियो ।
सीएनआई ११औँ वर्षमा
नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) ११औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सो अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आर्थिक मुद्दालाई केन्द्रमा ल्याउन सीएनआईले सकारात्मक भूमिका खेलेको बताए । उनले सो अवसरमा सीएनआईको स्मारिकासमेत विमोचन गरेका थिए ।
उद्योगमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवले सरकारले औद्योगिक नीति ल्याएको बताउँदै यसले उठाएका विषयवस्तु समावेश गर्नका लागि ऐनसमेत ल्याउने बताए । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विनोद चौधरीले परिसङ्घले निजी क्षेत्रको मुद्दालाई सर्वोपरि ठानेर अगाडि बढेको उल्लेख गरे । उनले व्यवसायिक सोच र लक्ष्यका साथ परिसङ्घ आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने बताए । परिसङ्घ १० वर्षपुगेको अवसरमा पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय भरतमोहन अधिकारी र डा. रामशरण महत तथा सभासद् हरि रोक्का र अर्थविद् डा. मदन दाहालले समेत शुभकामना दिएका थिए । सो अवसरमा परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्रकुमार बस्न्यात र परिसङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष टेकचन्द्र पोखरेलले निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन परिसङ्घको दायित्वका बारेमा बोलेका थिए । सन् २००१ मा विभिन्न औद्योगिक घरानियाँहरूको समूहमा परिसङ्घको गठन भएको थियो । परिसङ्घका अहिले विभिन्न औद्योगिक समूहसहित चितवन, रूपन्देही र मोरङलगायत जिल्लाहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन् ।
नवदुर्गा फाइनान्सको बोनस शेयर पारित
नवदुर्गा फाइनान्सले शेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस शेयर तथा त्यसबापतको कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव ५३ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कम्पनीको शनिवार भक्तपुरमा सम्पन्न १४ औं साधारणसभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो । सभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीले गत आवमा रू. १ करोड ७३ लाख खुद नाफा गरेको थियो, जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ७२३ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष२०६९/७० सम्ममा काठमाडौंको अनामनगरमा आफ्नै भवन बनाउने तथा चुक्ता पूँजी रू. २२ करोड ५० लाख पुर्‍याउने बताएको छ ।
लर्ड बुद्धको बोनस शेयर पारित
लर्ड बुद्ध फाइनान्स लिमिटेडको शनिवार राजधानीमा सम्पन्न पाँचौ साधारणसभाले शेयरधनीहरूलाई १५ प्रतिशत बोनस शेयर दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । साधारणसभाले चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी रू. १६ करोड ८५ लाख पुर्‍याउने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । गत असारमसान्तमा कम्पनीको रू. ५५ करोड २६ लाख निक्षेप सङ्कलनका साथै रू. ६५ लाख कर्जा प्रवाह रहेको थियो । कम्पनीले गत आवमा रू. ३ करोड ३ लाख सञ्चालन नाफा गरेको बताएको छ ।
बीपीसीको नगद तथा बोनस लाभांश पारित
बुटवल पावर कम्पनीको १८औं वार्षिकोत्सव शुक्रवार राजधानीमा सम्पन्न भयो । सो सभाले शेयरधनीलाई २० प्रतिशत नगद लाभांश तथा १० प्रतिशत बोनस शेयर दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । साधारणसभामा बोल्दै कम्पनीका अध्यक्ष पद्म ज्योतिले कम्पनीले यसै आवदेखि आँधीखोला जलविद्युत्को क्षमता वृद्धि आयोजना निर्माण शुरू गर्ने जानकारी दिए । कम्पनीले काबेली-ए र न्यादी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणसमेत यसै वर्षदेखि शुरू गर्ने बताएको छ । सन् २०११ को अन्तसम्ममा तल्लो मनाङमस्याङ्दी आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले ग्रामीण विद्युतीकरण विस्तार आयोजनाअर्न्तर्गत ३ हजार ९ सय थप ग्राहकहरू कम्पनीको वितरण सञ्जालमा थपिने बताएको छ ।
विश्व विकास बैङ्कको साधारणसभा
विश्व विकास बैङ्कको तेस्रो वार्षिक साधारणसभा शनिवार पोखरामा सम्पन्न भयो । सो सभाले आगामी चार वर्षका लागि र्सवसाधारण समूहबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी रञ्जुकुमारी गुरुङ, जगनसुवा गुरुङ र सजीव बाँनियालाई सञ्चालक समितिमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । हाल बैङ्कको चुक्ता पूँजी रू. २४ करोड रहेको छ । बैङ्कको गत असारमसान्तमा रू. १ अर्ब २६ करोड निक्षेप सङ्कलनका साथै रू. १ अर्ब कर्जाप्रवाह रहेको थियो । बैङ्कले गतआवमा रू. १ करोड ४५ लाख सञ्चालन नाफा गरेको थियो । बैङ्कको चालू आवको असोजमसान्तमा रू. १ अर्ब ३८ करोड निक्षेप सङ्कलनका साथै रू. १ अर्ब २० करोड कर्जाप्रवाह रहेको छ । बैङ्कले गत असोज मसान्तसम्ममा रू. ९४ लाख सञ्चालन नाफा गरेको थियो । हाल बैङ्कका प्रधान कार्यालयसहित ९ शाखा सञ्चालनमा छन् ।
वीरगञ्ज फाइनान्सको लाभांश पारित
वीरगञ्ज फाइनान्सको सातौं वार्षिक साधारणसभा शुक्रवार वीरगञ्जमा सम्पन्न भयो । उक्त सभाले शेयरधनीलाई १० दमलव ५३ प्रतिशतका दरले लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । साधारणसभाले उचित किसिमको मर्जरसम्बन्धी प्रस्ताव आएमा सञ्चालक समितिलाई आवश्यक कदम चाल्न अधिकार प्रत्यायोजन प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । सभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीको गत असारमसान्तमा रू. २ अर्ब ४७ करोड निक्षेप सङ्कलनका साथै रू. २ अर्ब २६ करोड कर्जा प्रवाह रहेको थियो । कम्पनीले गत आवमा रू.८ करोड ८४ लाख सञ्चालन नाफा गरेको थियो । कम्पनीको गत असोजमसान्तमा रू.२ अर्ब ९५ करोड निक्षेप सङ्कलनका साथै करीब रू. २ अर्ब ७८ करोड कर्जा प्रवाह रहेको थियो । कम्पनीले चालू आवको प्रथम त्रैमासमा रू. १ करोड ४३ लाख सञ्चालन नाफा गरेको जानकारी दिएको छ ।
साना किसान सहकारीसम्बन्धी पुस्तक
डा. पुरुषोतम श्रेष्ठले ‘फाइनान्सियल प्रोफमेन्स अफ स्मल फारमर्स कोअपरेटिभ लिमिटेड इन नेपाल’ नामक पुस्तक ल्याएका छन् । उक्त पुस्तकको नेपाल राष्ट्रबैङ्कका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले शनिवार विमोचन गरे । विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले लघुवित्त संस्थाले लघुकर्जा प्रवाह गरेजस्तै लघुबीमाको कार्यक्रमसमेत अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । पुस्तक नेपालको साना किसान र तथा सहकारीको बारेमा बुझ्न सहयोगी हुने उनको भनाइ थियो । पुस्तकको विषयवस्तुमाथि अर्थविद् डा. मदनकुमार दाहाल, डा.गोविन्द भट्टराईलगायतले टिप्पणी गरेका थिए । लेखक डा. पुरुषोतम श्रेष्ठले आफूले गरेको अध्ययन र अनुभवलाई समेटेर पुस्तक लेखेको बताए । ओरिएण्टल पब्लिकेशनले बजारमा ल्याएको सो पुस्तक अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको छ ।
डीसीबीएलको थप शाखा तथा एटीएम
डीसीबीएल बैङ्कले आज आइतवारदेखि काठमाडौंको गोङ्गवुमा शाखा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । बैङ्कको यो २१ औं शाखा हो । त्यसैगरी बैङ्कले आइतवार नै त्रिपुरेश्वरस्थित ब्लूवर्ड डिपार्टमेण्टल स्टोरमा एटीएम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । हाल बैङ्कले ‘डीसीबीएल सुपर सेभिङ बचत खाता’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस खातामा ११ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइने बताइएको छ । त्यसैगरी बैङ्कले र्’कर्मचारी बचत’ योजनाअर्न्तर्गत ९ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्दै आएको बताएको छ । यो खाता न्यूनतम रू. १ सयमा खोल्न सकिने बैङ्कले जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी बैङ्कले रू. ५ सय वा त्यसको गुणन जाने रकम ३ वा ५ वर्षको बचत योजनामा जम्मा गर्दा १० प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्दै आएको छ । यस खातामा समयावधिअघि पनि ९० प्रतिशतसम्म रकम भिक्न सकिने व्यवस्था रहेको बैङ्कले जानकारी गराएको छ ।
जाडोका लागि जोन प्लेयर्सका पहिरन
सूर्य नेपालले पुरुषहरूका लागि जाडो यामलाई लक्षित गरी जोन प्लेयर ब्राण्डका विभिन्न पहिरनहरू बजारमा ल्याएको छ । बजारमा आएका यी नयाँ पहिरनहरू समयसापेक्षिक स्टाइल, आकर्षक रङ तथा आरामदायी फिटिङमा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । नयाँ पहिरनहरूमा स्वेटर, स्वेट सर्ट र ज्याकेट रहेका छन् । यी पहिरन जोन प्लेयर्स एक्सक्लुसिभ ब्राण्डेड आउटलेट्स तथा नेपालभरका प्रमुख पसलहरूमा उपलब्ध हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
होण्डा जेनेरेटर किन्दा मोबाइल सेट उपहार
नेपालका लागि होण्डाको अधिकृत विक्रेता स्याकार कम्पनीले ‘होण्डा जेनेरेटर अन एण्ड लाइफ अन’ नामक योजना ल्याएको छ । यस ओजनाअन्तर्गत प्रत्येक ४ केभीए होण्डा जेनेरेटरको खरीदमा ग्राहकले २ हजार ५ सय ९० रुपैयाँ मूल्यको एक थान फिलिप्स मोबाइल सेट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी ४ केभीए क्षमताभन्दा माथिका जेनेरेटरको खरीदमा ग्राहकले ५ हजार ४ सय ९० रूपैयाँ मूल्यको फिलिप्स डीभीडी प्राप्त गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले यी जेनेरेटर किन्दा फाइनान्सको समेत सुविधा प्रदान गर्ने बताएको छ । साथै नबिल बैङ्कको क्रेडिट कार्डका उपभोगकर्ताले पूर्ण किस्ताबन्दीमा जेनेरेटर खरीद गर्न सक्ने बताइएको छ । कम्पनीले होण्डाका जेनेरेटरमा १ वर्षको वारेण्टी तथा ३ पटकसम्मको सर्भिस निःशुल्क दिँदै आएको छ ।
एसएचटीसीका ‘गिगासेट साइमेन्स’
एसएचटीसी इण्टरनेशनल प्रालिले जर्मनीमा उत्पादित ‘गिगासेट साइमेन्स’ टेलिफोन सेट नेपाली बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले तारसहित र ताररहित ‘कर्डलेस’ फोनहरू नेपाली बजारमा ल्याएको हो । यी सेटहरू यूरोपियन मापदण्डका हुनुका साथै वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त रहेको कम्पनीको दाबी छ । यी सेटलाई पानी, धूलो, चिसोलयागतले कुनै प्रभाव नपार्ने कम्पनीले बताएको छ ।
प्रभु फाइनान्सको शाखा न्यूरोडमा
प्रभु फाइनान्स कम्पनीले काठमाडौंको न्यूरोडमा शाखा खोलेको छ । कम्पनीको यो २५औं शाखा हो । उक्त शाखाको कम्पनीका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनले शुक्रवार उद्घाटन गरे । कम्पनीले उक्त शाखामा एटीएमसमेत जडान गरेको छ । चालू आवमा देशका विभिन्न स्थानमा शाखा खोल्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले ग्राहकहरूलाई सम्पूर्ण आधुनिक बैङ्किङ सुविधा दिँदै आएको बताएको छ ।
जहाज किन्न ढिलो नगर्न आग्रह
विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरूले नेपाल एयरलाइन्सले जुनसुकै कम्पनीको भएपनि जहाज किन्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले हालै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेटी यसका लागि ठोस पहल गर्नसमेत आग्रह गरे । नेपाल भ्रमण वर्ष२०११ शुरू भइसकेको सन्दर्भमा टिकट नपाएकै कारण पर्यटक आउनबाट वञ्चित हुनपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूले बताए । यूरोप तथा जापानबाट नेपालमा प्रत्यक्ष उडान नभएकाले यहाँ आउन चाहने पर्यटकहरू आउन चाहेर पनि आउन सक्ने अवस्था नरहेको प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराउँदै व्यवसायीहरूले नेपाल एयरलाइन्सले तत्काल जहाज किनेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् । यसरी प्रधानमन्त्री समक्ष जहाज खरीदको माग राख्नेहरूमा नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, होटल सङ्घ, नेपाल, एयरलाइन्स अपरेर्टस एशोसिएशनलगायत २८ ओटा संस्था रहेका छन् ।